तपाईको वजन अनुसारको भोजन र पानी कति वजनका लागि कति उपयुक्त ? - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा तपाईको वजन अनुसारको भोजन र पानी कति वजनका लागि कति उपयुक्त ?
तपाईको वजन अनुसारको भोजन र पानी कति वजनका लागि कति उपयुक्त ?
चाखलाग्दो कुरा admin November 21, 20200Comment
तपाईको वजन अनुसारको भोजन | डाक्टर तथा पोषण विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार मानिसले दिनमा कम्तिमा पनि ८ गिलास वा झण्डै दुइ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर दिनभरमा कति पानी पिउने भन्ने कुरा मानिसको सरीरको वजन तथा जिउडालमा भर पर्छ । कत्रो जिउ भएका मानिसले कति पानी पिउने ? यसको सुत्र जानिराखौँ :